Bogga Bulshada - Muuqaalka Shumaca
Maxaa ku yaal Boggeena Bulshada
Boggan waa la cusbooneysiin doonaa maalin kasta wuxuuna ka koobnaan doonaa qoraallo la xiriira bulshada oo ku xiran kanaalkayaga YouTube iyo degelkeenna. Waxaan rajeyneynaa inaad dhamaantiin fikirkaaga ku wadaagi kartaan shabakadeena iyo kanaalka Youtube maadaama ay faa iido weyn noo leedahay.
Waxaan higsaneynaa inaan ku darno waxyaabo badan boggan iyo kuwa kaleba sida usbuucyadu usocdaan. Marka fadlan si joogto ah u hubi boggan, haddii aad taageere u tahay boggan iyo baloogyada aan soo dhigno, la wadaag taageeradaada habkan, aad baa loo qadarin lahaa.
Waxaan soo kordhin doonaa nooc ka mid ah qolka lagu sheekeysto, qolka lagu sheekeysto ama sanduuqa farriinta si aan u wada sheekeysanno isla markaana dadka kale ay uga tagi karaan farriimaha una diraan farriimo. Waan ka shaqeyneynaa waxaana rajeyneynaa in dhowaan la soo gabagabeeyo. Hareerahaas ka joog oo iska hubi barta.
Waxaan ka jawaabi doonnaa wixii su'aalo ah ee aad ka qabto boggeena ama qoraalladeenna. Waxaad sidoo kale noo soo diri kartaa emayl ku saleysan baloogyadeena, waxaadna na weydiin kartaa wax kasta oo aad jeceshahay. Waxaan ka jawaabi doonnaa dhammaan su'aalaha la soo gudbiyey mar walbana waan joogi doonnaa si aan uga jawaabno. Waxaad sidoo kale ku qori kartaa dusha sare haddii aad sidaas rabto.
Hoos waxaa ku yaal dhammaantood faallooyinkii ugu dambeeyay ee ku saabsan qoraaladayada iyo waxyaabaha kale ee boggeena.
DIMA on Demi Rose Mawby oo qof walba uga naxday muuqaal qaawan oo Instagram ah 9th October 2021
DIMA on Scums Rabitaan - Dhammaadka Sharaxaad 11th September 2021
Haa dabcan ma jecli Akane. Runtii waa sababta dhabta ah ee aysan isula joogin oo…
matsujam on Scums Rabitaan - Dhammaadka Sharaxaad 11th September 2021
Si la yaab leh ayaan u qummanahay dhammaadka. Btw, waxaan filayaa in Hana ay wali bikro tahay maadaama Mugi uusan waligiis runtii tagin…
DIMA on Maxay Tahay Waa Inaad Daawataa Samurai Champloo 10th September 2021
Waad ku mahadsan tahay inaad na soo bandhigtay.
DIMA on Scums Rabitaan - Dhammaadka Sharaxaad 10th September 2021
Haa, waad saxan tahay, waa wax aad looga xumaado in aysan mar dambe is arki doonin. Laakiin waxaan…
Baraha bulshada kale
Hoos waxaa ku yaal xiriiriyaha kanaalkayaga YouTube. Aad iyo aad ayaan u qadarin doonnaa haddii aad ku biirto kanaalkayaga. Tani waxay naga caawin doontaa inaan u korno kanaal ahaan. Waxaan hiigsaneynaa inaan soo dirno fiidiyowyo laxiriira qoraalladayada baloogyada. Markaa hadaad soo booqatay kanaalkayaga fadlan subscribe dheh oo like wixii nuxur ah ee la soo dhajiyay tani wax weyn ayey noo taraysaa.
Haddii aad u maleyneyso inaan ku sii fidineyno barnaamijyo kale sida Instagram iyo FaceBook fadlan nala soo socodsii faallooyinka, ama nala soo xiriir email ahaan.
Ka mid noqo adeeggayaga ku-qoritaanka emaylka ee hoose. Kaliya gal cinwaanka emaylkaaga waxaana laguu soo diri doonaa emayl markasta oo aan qoraal cusub samayno.
Ku qor cinwaanka emailkaaga
Macluumaad ku saabsan baloogyadayada iyo boggayaga internetka
Waxaan hiigsaneynaa inaan soo dirno baloogyo badan sidii aan muddo dheer ahaan jirnay. Waxaan bilaabi karnaa Patreon dhowaan oo deeqaha oo dhan si weyn baa loo qadarin doonaa. Dhammaan deeqaha waxaa lagu bixin doonaa qoraalladayada 'blog' iyo wax kasta oo kale oo ku saabsan barta. Waxaan sidoo kale higsaneynaa inaan ku soo dhejino xamuul waxyaabo badan boggan iyo waqti dheer. Waxaan sidoo kale qori doonnaa dib u eegista anime-ka la xiriira iyo qeexitaanno dhacdooyin sidoo kale. Kuwani waxyar bay ka dib imanayaan hase yeeshe. Waa lagugu wargalin karaa marwalba oo aan soo dhigno boosteejo cusub adoo iska diiwaangelinaya bartayada loo diro.
Tani waxay ka dhigan tahay inaadan waligaa ka maqnaan doonin mid ka mid ah qoraaladayada blog-ka. Waxaan ku daboolnaa waxyaabaha ku saabsan anime-ka aadka loo jecel yahay waxaana dooneynaa inaan soo dhajinno macluumaadka ku saabsan warshadan. Tani waa ujeedkeena kaliya. Wixii jawaab celin ah ee laga bixiyo boggeena iyo qoraaladayada baloogyada waa mid aad loo qiimeeyo. Waxaan jeclaan lahayn inaan dib u maqalno waxa aad ka aaminsan tahay boggeena, waxaanan higsaneynaa inaan helno taageere daacad ah oo aan u gudbin karno waxyaabaha ku jira. Haddii aad hayso wax talo bixinno ama su'aalo ah oo qoraal ah oo ku saabsan qormada fadlan ha ka baqin inaad noo soo dirto adoo adeegsanaya emaylka kor lagu soo sheegay.
Fiidiyowyadii ugu dambeeyay ee YouTube-ka kanaalkayaga
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah fiidiyowyadii ugu dambeeyay ee YouTube-ka ee kanaalkeena. Waxaan soo dhejineynaa fiidiyowyo laxiriira qoraaladayada blog-ka iyo guud ahaan anime, iyo sidoo kale noocyo kale oo taxane animated ah. Fadlan tixgeli inaad jeceshahay oo aad faallo ka bixiso fiidiyowyada, iyo sidoo kale inaad iska diiwaangeliso kanaalka, tani run ahaantii waxay naga caawin lahayd inaan ka baxno oo aan u korno sida ugu macquulsan.
Waxaad ka daawan kartaa qaar ka mid ah liistadayada liiska ku jira YouTube-ka adiga oo gujinaya fiidyowyada. Waxay ka mid yihiin Hyouka, Trinity Seven, Miraha Grisaia, HenSuki iyo Fasalka Elite-ka. Waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxeysan karto iyaga waxaadna hubin kartaa sidoo kale anime-ka bilaashka ah ee aan ku heli karno annaga Bogga Anime ee bilaashka ah.